मुना ह’त्याका’ण्डः पूर्वसचिव पत्नी ह’त्या प्रक’र’णमा श्रीमान् तिरै सोझियो शंकाको घेरो ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मुना ह’त्याका’ण्डः पूर्वसचिव पत्नी ह’त्या प्रक’र’णमा श्रीमान् तिरै सोझियो शंकाको घेरो !
काठमाडौ । पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुना कार्की डेढ साताअघि घरभित्रै मृ त अवस्थामा फेला परेकी थिईन । उक्त घ टना मा घरको कामदार पनि मृ त अवस्थामा भेटिएका थिए जसले गर्दा यो घ टना थप रहस्यमय बनेको थियो । पछिल्लो अनुसन्धान क्रममा प्रहरीको हात थप नयाँ तथ्यहरु फेला परेको जनाईएको छ । जनआस्था पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रहरीको शंकाको घेरामा अहिले पूर्वसचिव अर्जुन कार्की समेत परेका छन् ।
तर अहिले प्रहरीले १३ औँ पुण्यतिथिका दिनसम्म घ टना का थप तथ्य बाहिर नल्याउने नीति बनाउँदै अनुसन्धान गरिरहेको छ । अ प राध महाशाखाबाट अनुसन्धानरत एक प्रहरीले जनआस्थासंगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘धा रिलो ह ति यार वा बि ष्फो टक पदार्थ (ब न्दुक) को प्रयोगबाट गरिएको ह त्या थियो भने एक्लो संलग्नता पत्यारिलो हुन्थ्यो तर मुनाको ह त्या सहजै पत्यारिलो छैन जसरी दुनियाँ अझै पनि दरबार ह त्या का ण्डमा बाबु, आमासहित काका, फूपू र भाइबहिनीलाई दीपेन्द्रले मा रे को भन्नेमा अझै विश्वस्त छैन ।’